Manana modely fanoritana fotoana ve i Excel? - Microsoft Excel
Tena > Microsoft Excel > Takela-potoana Excel 2015 - valiny amin'ireo olana
Takela-potoana Excel 2015 - valiny amin'ireo olana
Manana modely fanoritana fotoana ve i Excel?
Mitovy amin'nytakelaka fanoratanaamin'nyExcel, ny totalin'ny ora, ny ora mahazatra ary ny ora fanampiny dia isaina ho azy. ... Itymodely takelakadia afaka manampy anao hanaraka ny fahombiazan'ny ekipa ao anatin'ny orinasanao na orinasa.
Hey, izaho dia Kelvin avy any Hubstaff ary amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba fananganana takelaka fanoratana isan-kerinandro ao Excel. Eny ary, toy ny nolazaiko ihany, hamorona takelaka fanoratana isan-kerinandro ao Excel izahay ary rehefa vita amin'ny zavatra rehetra dia tokony ho toa izao ny takelakao ary azonao atao ny manamboatra ny zava-drehetra eto, ao anatin'izany ny loko marika ary azonao ampiana ny sary famantarana ny orinasa avy eo ankavia ka hatrany amin'ny ankavanana dia manana tsanganana roa isika. Ho hitanao ny daty, ny lahasa, ny fotoana manomboka, ny ora farany, ny ora mahazatra, ny ora fanampiny, ny ora feno ary ny fizarana naoty.
Somary kely ihany izany. Ankehitriny, alohan'izay rehefa mameno ny paikady izahay dia hanampy 8:00 maraina ka hatramin'ny 4:00 hariva. ho an'ny fotoana hanombohana sy hifaranana eto, noho izany dia manana andro maharitra 8 ora isika, izay ho lasa mahazatra mahazatra hoy aho fa manana izay miomana amin'ny raikipohy ho avy.
Andao atomboka amin'ny tsanganana mandritra ny ora manontolo izao. Hampiarahantsika amin'ny formula mihetsika ny hetsika mahazatra, ny totaliny ary ny ora mihoatra ny fotoana rehetra hamenoana ho azy ny zava-drehetra. Andao isika hanomboka amin'ny ora feno, andao hiditra ity paozy manaraka ity ary handika fotsiny aho ary apetaho ity mba hitovy amin'ny ora farany ny ora totalin'ny ora fanombohana 24.
Hanana an'ity eo amin'ny efijery ho hitanao aho raha manazava. Ny zavatra iray izay toa hafahafa eto dia ny fampitomboana ny raikipohy amin'ny 24, saingy tsy maintsy ataontsika izany satria ny Excel dia misoratra anarana iray andro ho sandan'ny iray, ka ohatra ny isa, 12 ora dia manome lanja 0,5.
Manaraka, aleo ampidirina ny raikipohy ho an'ny ora mahazatra ary ity tsanganana ity dia miankina mazava tsara amin'ny fetra farany ambony napetranao mandritra ny herinandro fiasana mahazatra, fa amin'ity ohatra ity dia hihevitra izahay fa herinandro fiasana mandritra ny 40 ora miaraka amin'ny 8 ora Andro sy ny sisa rehetra, dia Diniho ny ora fanampiny. Ka ho toy izao indray ny formule, ho adikao sy apetako eto satria napetrako, fa apetrako eo amin'ny efijery ireo formulas ireo ho toy ny Wego mba ahitanao ny fandaminana azy ireo. Ka ity raha fanambarana.
Ka holazaintsika amin'ity tsanganana ity ny famindrana zavatra amin'ny tsanganana hafa arakaraka ny ora. Tianay hohidiana amin'ny valo ora ity satria io no ora mahazatra indrindra avela ao anatin'ny iray andro. Izay rehetra ankoatr'izay, araka ny nolazaiko, dia heverina ho ora fanampiny.
Raha mampiasa an'io fampitahana io miaraka amin'ny equation ao amin'ny tsanganana manaraka isika, dia afaka mamindra ny ora fanampiny ho any amin'ny tsanganana Overtime mora foana. Andao hiroso amin'ny fotoana fanampiny isika ary ny endriny eto dia hitovy kely amin'ny zavatra noforonintsika. Handika sy hametaka azy ireo indray aho ary hametraka azy ireo tsara ka toa mitovitovy amin'ilay fampitahana hafa izay vao nasiako ny tsanganana 'ora mahazatra', saingy misy fahasamihafana kely eto raha ny amin'ny firafitr'ilay fampitahana ihany.
Ankehitriny dia holazaintsika amin'ity tsanganana ity mba hanangona ora fanampiny amin'ny tsanganana miaraka amin'ireo ora mahazatra ary asehoy azy ireo eto. Mba hampisehoana aminao izao ny endriny, hanova ora eto aho mba hanana 10 ora isan'andro isika ary ho hitanao fa mbola io no satroka valo ora, nefa izao dia manana adiny roa isika izay naseho tao amin'ny Tsanganana mihoatra ny ora. Azonao atao ny mahita ny fomba famindrana ho azy ny zava-drehetra ao anaty tsanganana sahaza azy.
Ankehitriny rehefa nanangana ny ora mahazatra sy ny ora fanampiny izahay, dia hikajiana ny karaman'ny mpiasa ary hampitomboinay ny ora miasa amin'ny taha-karen'izy ireo, izay mahitsy mahitsy ary hitanao eo an-tampony amin'ny efijery dia manana sela isam-bolana isika. Ny zavatra tokony hatao dia ny mandika sy mametaka ity fitoviana tsotra ity, ary avy eo dia hamindra an'io fampitahana io koa isika amin'ny tsanganana amin'ny ora fanampiny. Ankehitriny dia ampitomboina amin'ity taha tahan'ny ora ity. Raha manana taha hafa amin'ny ora fanampiny ianao, toy ny adiny iray sy sasany dia azonao atao ohatra ny manampy sela misaraka etsy ambony mba hikajiana izany koa.
Ny zavatra kely farany tiako aseho anao dia ny fomba fandefasana ireo tsipika samihafa amin'ny takelakao mba hitazomana ny zava-drehetra ho madio sy hadio rehefa mandehandeha amin'ireo fidirana samihafa ianao. Ka eo an-tampon'ny farany eto dia hijanona eo amin'ny toerany ny zava-drehetra manomboka amin'ny laharana voalohany ka hatramin'ny enina ary vita ianao. Eny, ny zavatra farany tiako horesahina alohan'ny hamononantsika ity lahatsoratra ity dia ny fameperana ny fidirana amin'ireo takelaka misy azy io ka ny mpitantana ihany no afaka miditra amin'ny takelaka aorian'ny nanaterana azy ireo ary izany dia hanampy amin'ny fampihenana ny hosoka, fandoavam-bola be loatra ary hisorohana ny fidirana tsy nahy.
Ilaina avokoa izany rehetra izany raha tsy tafiditra ao anaty takelaka takelaka tanana toy izao ny fananganana fampirimana roa misaraka amin'ny safidy fitahirizana an-tserasera toa ny Google Drive na Dropbox ary ny tianao atao dia ny mamela ireo takelaka fanoratana ho any amina fampirimana ary avy eo, rehefa avy nalefa, mifindra amina folder hafa folder izay ferana fatratra amin'ny fitantanana ny fidiranao mba hahafahan'ny mpiasa mandefa ny takelaka ary tsy afaka miditra amin'izy ireo aorian'ny fandefasana azy ireo satria ao amin'i Moved ity fisarahana misaraka ity. Manantena aho fa nahita ity lahatsoratra ity manampy. Raha azonao atao ny mitazona ny rantsan-tànanao hiampita etsy ambany ary vaovao ianao eto, dia tokony hisoratra anarana amin'ilay fantsona ianao.
Raha liana ianao dia manana modely toa ilay vao natsanganay tato amin'ity lahatsoratra ity izahay, miverina amin'ny tranokalanay, manana rohy aho hampidina ireo modely ireo eo ambanin'ny famaritana ny lahatsoratra. Misaotra anao indray mijery fa hiresaka aminao izahay amin'ny manaraka.
Ahoana no hahitako ny ora fiasana ao amin'ny Excel?
mampiasaExcelnyHanara-maso ny mpiasaTime
Dingana 1- Switch Switch. ...
Dingana 2- Lohatenin'ny tsanganana fidirana. ...
Dingana 3- Misafidiana endrika daty. ...
Dingana 4- Misafidiana fotoanaampyFormat ...
Dingana 5- Ampifanaraho amin'ny soatoavina maharitra. ...
Dingana 6- Ampidiro ny Formula hanisanaORANiasa isan'andro. ...
Dingana 7- Ampidiro ny Formula hanisana ny isan'nyORANiasa isan-kerinandro.
Amin'ity fampianarana Excel ity dia hamorona takelaka misy fotoana ahafahanao manara-maso ny ora niasan'ny mpiasa sy ny fotoam-pialan-tsasatr'izy ireo na ny PTO ho an'io mpiasa ora io. Hizaha safidy iray avy eo izay ahafahanao manampy hanamora kokoa ho anao sy ireo mpiasanao ny firaketana ny fotoanao. Mampiasa taratasy iray isaky ny mpiasa izahay.
Ka andao aloha hanomboka amin'ny fanoratana ity taratasy ity amin'ny anaran'ny mpiasa. Voalohany, andao hamorona sehatra iray ahafahanao haingana, indray mipi-maso, mijery ireo antsipiriany lehibe sy ny toeran'ny PTO an'ny mpiasanao. Ho fanampin'izay, ny sanda ampiasaina eto dia manampy anay koa amin'ny fanaovana kajy ny PTO an'ny mpiasa isan'ora.
Amin'ity ohatra ity, ny karama fialantsasatra sasha dia 80 ora, na roa herinandro isan-taona. Afaka mahazo bebe kokoa na latsaka izy arakaraka ny ora fiasany. Mampiasa 52 izahay mandritra ny isan'ny herinandro fiasana.
Ary ho fampahalalana anao, ny soatoavina ampiasainay eto dia mety tsy mitovy amin'ny orinasanao. Mpiasa maharitra izy ka hampiasa 40 ora isan-kerinandro. Ary ankehitriny isika dia afaka mampiasa ireo soatoavina ireo mba hikajiana hoe ohatrinona ny fotoana fialan-tsasatra azony isaky ny ora niasana.
Raha te hanao izany dia ampitomboy amin'ny 52 ny 40 ora. Avy eo mila mizara izany valiny izany isika amin'ny 80 ora iorenantsika ny fotoam-pialan-tsasatra. Ohatra: i Sasha dia mahazo ora fialan-tsasatra 0,0385 isaky ny ora iasany.
Manaraka izany dia mamorona lohateny ho an'ny fizahana fotoana izahay. Ampiasainay ny daty, andro, fotoana misy hajia, navoaka ny fotoana, fialan-tsasatra, ora niasana, fotoana fialan-tsasatra na ora PTO azonay, fampiatoana herinaratra efa niasa ary fakana herinaratra sisa tavela. Noho izany dia manomboka amin'ny fidirana amin'ny daty isika.
Ny Alatsinainy voalohany tamin'ny taona 2020 dia ny 30 Desambra 2019. Avy eo ny antoandro dia andro amin'ny herinandro. Ka ny daty daty fotsiny no resahina, fa mampiditra endrika manokana hanehoana ny andro amin'ny herinandro.
Amin'ireo sehatra vitsivitsy manaraka dia hampiasa fandrafetana fotoana izahay ary, mba hikajiana tsara ny totalinay, dia zava-dehibe ny fandefasana ampiasaintsika eto. Ho an'ny saha voahodidina sy voahodina dia mampiditra endrika ora miaraka am na pm ary hofidiko ilay milaza hoe 1:30 tolakandro.
Ary afaka miditra amin'ny 8:00 maraina isika ary milaza fa i Sasha dia niasa tamin'ny 30 tamin'ny 6:00 hariva. dia tokony haverina endrika koa ny tsanganana fiatoana, na izany aza, amin'ity indray mitoraka ity dia mampiasa endrika tsy mampiseho am na pm isika.
Izany dia satria asehontsika ny fotoana fialan-tsasatra, fa tsy ny ora fiasan'ny mpiasa sy ny fijanonany ho an'ny fiatoana.Raha tianao ny mahita ny ora fiasan'ny mpiasa sy ny famoahany dia azonao atao ny maka tahaka ireo andry voatsinjara sy miverina ary soraty tsotra fotsiny izy ireo mifanaraka amin'izany. Ary rehefa miditra ny fotoana anaovan'ny mpiasa mandritra ny fiatoana izahay dia mbola miditra adiny iray amin'ny. zanatany raha endrika ora io.
Mba hanisana ny ora fiasana dia esorinay ny fiatoana sy ny ora voatondro amin'ny fotoana nivoahan'ny mpiasa. Avy eo dia ampitomboinay amin'ny 24 ity hanovana ny sandan'ny fotoana ho isa mahazatra, ary mety mila manavao ny fandefasana azy amin'ny endrika isa ianao indraindray. Azontsika atao ny manisa ny PTO Ea rned.
Ary ny raikipohy momba izany dia ny ora fiasan'ny PTO isan'ora. Ary hakatonantsika io mba hahafahantsika mampiasa izany amin'ny sela hafa. PTO Nampiasaina dia foana foana mandra-pahatongan'ny mpiasa mampiasa PTO na fotoam-pialan-tsasatra .ary PTO sisa tavela, esorinay ny PTO ampiasaina amin'ny PTO Mahazo.
Safidio izao ireo saha ireo ary sintomy izy ireo hamita herinandro iray manontolo. Ary noforoniko ho an'ny herinandro fiasana fito andro Alatsinainy ka hatramin'ny Alahady. Mila ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma fotsiny ny orinasanao.
Ka amin'ny manaraka dia hamafana ny saha rehetra tokony hiditra isika avy eo. Ary avy eo, miaraka amin'ny sela mavitrika anao na aiza na aiza amin'io data io, dia hamadika izany ho latabatra iray izahay. Kitiho ny kiheba raha hanisy andalana hafa ary hamafa izay mety ho nofenoina.
Eo ambanin'ny 'ora fiasana' dia ampio ny isan'ny ora niasana ary atokisantsika izany. Ary halefanay any amin'ny PTO Earned sy PTO Nampiasainay izany, ary hamolavola endrika PTO Mahazo manana toerana decimal maromaro kokoa izahay. Ankehitriny ny PTO sisa dia manisa ny PTO ampiasaina amin'ny PTO rehetra azo.
Ary hamolavola an'io amin'ny sahy ihany koa isika. Ka ity no herinandro voalohany ananantsika. Mba hamoronana ny herinandro faharoa dia alahako fotsiny ilay izy ary apetako eo ambanin'ny latabatra mihitsy.
Ary mbola ho ampahany amin'ilay latabatra io. Ny zavatra ataoko hafa ankehitriny dia ny mametraka raikipohy amin'ny Alatsinainy amin'ny herinandro faharoa izay manondro ny andro farany tamin'ny herinandro teo aloha ary manampy iray ao amin'ilay sela etsy ambany ny talata ho avy izao, manondro ny alatsinainy etsy ambony izahay ary manampy iray koa. Ary avy eo dia esorintsika fotsiny izany.
Hamafa eto izahay izay milaza fa asabotsy ary mamerina mijery ity raikipohy PTO ity izahay hanohy hampiasa PTO amin'ity herinandro ity amin'ny PTO nahazoam-bola, fa izahay kosa hanampy ny PTO ambiny amin'ny herinandro mialoha. Ary andao aloha hanahaka ireo fotoana natokana ho azy ireo sy amin'ny ora tsy tapaka, mba hananantsika angon-drakitra vitsivitsy hijerena. Ary andao lazaina amin'ny Sabotsy, Sasha niasa tamin'ny 9:00 maraina ka hatramin'ny mitataovovonana ary tsy niala sasatra, ary milaza izahay fa tamin'ity herinandro ity dia nanao vakansy adiny efatra.
Ka andao lazaina fa niainga tamin'ny 12 ora tamin'ny Alakamisy izy ireo, ary tsy nisakafo antoandro. Ary satria manana an'ity herinandro faharoa ity isika miaraka amin'ny volavolan-kevitry ny daty nohavaozina sy ny raikipohy sisa tavela ao amin'ny PTO, dia afaka mandika ny herinandro faharoa isika, mamafa ity sabotsy ity ary manisa tsara ankehitriny ireo herinandro manaraka tokony hanaovanay kopia. Avy eo eto, mba hahitantsika ny satan'ny PTO misy anao ankehitriny, andao hamorona rijan-teny ho an'ny PTO Nahazoana Taona Hatramin'izao, izay hamintinantsika ny tsanganana PTO Earned ary hizara roa ho roa satria ara-teknika dia ampidirinay indroa izay rehetra ananantsika PTO. isan'andro ary avy eo dia mitovy ny vola mitovy amin'ny herinandro.
Ary manao zavatra mitovy amin'ny hazo PTO izahay ary mizara roa. Ary avy eo ny PTO Azo zahana hatramin'ny fiandohan'ny taona dia esorinay ny fiara PTO ampiasain'ny isaky ny fiara PTO azontsika. Mety ho sarotra izany.
Ary amin'ny alàlan'ny fampidirana an-tanana, ny fanaovana kopia ary ny fametahana azy dia misy toerana malalaka mandritra ny ora maro amin'ny lesoka. Safidy iray nahavariana ahy ny serivisy fitetezam-paritry ny fifamoivoizana an-dàlambe an'ny OnTheClock. Ny fampiharana anao, na amin'ny telefaona finday na birao, dia manamora ny fandefasan'ny mpiasanareo miditra sy mivoaka.
Ary ianao dia afaka mahita ny ora fiasana mahazatra sy ny fifandanjana PTO amin'ny fotoana tena izy ao amin'ilay famaritana. Manolotra fitsarana 30 andro maimaim-poana izy ireo. Ary raha manana mpiasa roa na latsaky ny iray ianao, maimaim-poana izany! Misaotra, OnTheClock, nanohana an'ity lesona ity.
Ary raha te hijery lahatsoratra bebe kokoa toa ity dia kitiho ireo rohy ireo. Misaotra anao.
Ahoana no fiasan'ny modely takelaka fanoratana ao amin'ny Excel?
Ity misy sary iray avy amin'ny Template Excel Timesheet isan-kerinandro: Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny 'Ara-potoana' sy ny 'Fotoana fivoahana' ianao, ny modely dia manisa ny ora mahazatra sy ny ora fanampiny. Raha misy fiatoana (toy ny fiatoana atoandro) tsy voaloa, azonao atao koa ny miditra ao.
Ahoana ny fikajiana ny ora fanampiny amin'ny takelaka Excel?
Amin'ny takelaka fanoratana ao amin'ny Excel, ny ora totaliny, ny ora tsy tapaka ary ny ora fanampiny dia isaina ho azy. Ity modely takelaka fanoratana ity dia afaka manampy anao hanaraka ny fahombiazan'ny ekipa ao anatin'ny orinasanao na orinasa. Ity dia maodely azo idirana.
Iza no takelaka tsara indrindra ho an'ny orinasa kely?
Tonga lafatra ho an'ny orinasa kely, mpandraharaha, na miasa irery, ity takelaka fanoratan-databatra Excel ity dia mirakitra ny fotoana, ny fiatoana ary ny fisakafoanana antoandro ho an'ny andro fiasana tsirairay. Amin'ny takelaka fanoratana ao amin'ny Excel, ny ora totaliny, ny ora tsy tapaka ary ny ora fanampiny dia isaina ho azy.
Azonao atao ve ny manova ny formula ao anaty takelaka?
Aza manova ny formula ao anaty takelaka. Ataovy ao anaty tsanganana 'Ara-potoana' sy 'Out time' fotsiny ny fidirana. Rehefa mamafa ny fidirana ianao dia hamafa izany amin'ny tsanganana ‘In time’, ‘Out Time’ ary ‘Break Hours’ ihany. Nanova ny sisin'ny pejy aho mba hahamety azy amin'ny takelaka tokana rehefa vita pirinty.